Manchester United Oo Weli Ku Jirta Loolanka Loogu Jiro Saxiixa Daafaca Sevilla Jules Kounde
HomeWararka CiyaarahaManchester United oo weli ku jirta loolanka loogu jiro saxiixa daafaca Sevilla Jules Kounde
October 13, 2021 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Ingiriiska, Horyaalka Spain, Suuqa kala iibsiga 0
Manchester United ayaa lagu soo waramayaa inay weli xiiseyneyso saxiixa daafaca Sevilla Jules Kounde .
Chelsea ayaa dalab weyn ka sameysay xiddiga heerka caalami ee dalka France intii lagu guda jiray suuqii xagaagii lasoo dhaafay, dalabkaasi ayaa fashilmay sababo la xiriira Sevilla oo ku adkeysaneysa in xidiga uu sii joogo.
Si kastaba ha ahaatee, iyadoo 22 jirkaan uu sii wado wacdaraha uu ka sameynayo kooxda ka dhisan La Liga.
Sida laga soo xigtay Fichajes , United ayaa weli ku jirta tartanka saxiixa Kounde inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga xagaaga soo aadan.
In kasta oo United ay hadda si fiican ugu diyaarsan tahay xulashooyinka dhexda dambe, kaliya Harry Maguire iyo Raphael Varane ayaa loo arkaa xulashooyinka mustaqbalka fog ee Ole Gunnar Solskjaer .
Sevilla ayay u badan tahay inay dalbato 68 milyan oo ginni oo ah qiimaha lagu heli karo haddii United ama koox kale ay soo gudbiyaan xiisaha 2022.